Mianatra Miteny Angisy Amin’ny Lantompeo “Persiana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2015 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Magyar, русский, Français, Deutsch, Ελληνικά, Català, 日本語, English
Andiany iray vaovao nivadika ho fihomehezana nanerana ny media sosialy.
Tsy mitsahatra ny mihomehy aho. Miavaka loatra ity! – Lantompeo Persiana Hanononana Ny Teny
Mampianatra ny mpijery ny fomba fanònona teny miaraka aminà lantompeo iraniana migobona sy mahafinaritra itony lahatsary maharitra valo hatramin'ny folo segondra itony. Mianàra manònona teny Anglisy aminà lantompeo iraniana tsy tena izy, ary tonòny ireo zavatra toy ny hoe “eskool” (school), na “eyes ceream” (ice cream).
Ary raha mbola tsy vitanao izany tamin'ny voalohany, dia hamerimberina izany in-telo ho anao ilay mpampianatra, miaraka amin'ny haavo samihafa amin'ny fanindriana ny fomba fanònona ny renitsoratra iraniana, ny zanatsoratra ary ny vaninteny.
Ny fon'ilay lahatsary dia fankalazàna fotsiny ny fomba mahafinaritra azon'ny Iraniana andraisana ny vazivazy, indrindra moa fa momba ny azy ireo ihany.
Ny Accent Cards no vondrona ao ambadik'ity andianà fampianarana mahatsikaiky ity. Mipetraka any Kanadà, nilaza ireo Iraniana dimy mpikambana ao anatin'ny fiarahan'izy ireo fa nirian-dry zareo ny hijanonana tsy hitonona anarana satria, araka ny mailaka nalefany ho an'ny Global Voices, “tsy dia ny momba anay loatra ilay izy, fa momba ilay lantompeo.”
Ny vondrona dia ahitàna izay lazain'ny iray amin'ny mpikambana hoe “Persiana iray, Rosiana iray, Indiana iray, Italiana iray, ary Irakiàna iray.”
Tia lantompeo maro aho, raha ny marina dia mivoaka miala amin'ny fomba fijeriko aho mba hijery ireo lahatsary misy olona miresaka aminà lantompeo samihafa. Ny loharanon'aingam-panahy tena lehibe tamin'ity hevitro ity dia ity lahatsary ity sy ito iray ito.
Izany dia fony aho nahatsapa ny hamaroan'ny fomba fanònona isankarazany ny teny Anglisy. Nahatonga eritreritra hitondra fomba iray hankalazàna ireo fomba rehetra fanònona ny teny Anglisy sy fizaràna azy io. Karazany toy ny lahatsary wikipedia iray momba ny lantompeo nefa laroina fampihomehezana.
Amin'ny maha-Persiana monina ivelan'i Iràna, dia manimanina ny fiteny Farsi aho. Isaky ny misy olona reko miteny amin'ny lantompeo Persiana dia lafatra ny androko. Meva ny lantompeo Persiana, mahaliana sy mahafinaritra. Tiako ny fomba fivazivazin'ireo Persiana, afaka mikaninkany amin'ny lantompeontsika isika no sady mirehareha aminy.
Monina aty Kanadà aho ary manana namana isankarazany, araka izany nomasahako ny hevitro ary natsanganay ny ekipanay.
Ny tanjonay dia ny hampakatra lahatsary iray isanandro ary hanitatra azy ho amin'ireo lantompeon'ny fiteny hafa (Arabo, Indiana, Rosiana, Italiana, Frantsay,…) arakaraky ny firosonay eo.
Araho ny andiany dia vetivety ianao hahay ny ‘Iraniana’ tononina “Per-shiana”